'ခိုလက်စထရော' (Cholesterol) ဆိုရင် ကြောက်တဲ့လူတွေများပါတယ်။ သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရောဆိုတဲ့ အဆီတစ်မျိုး ပုံမှန်ရှိသင့်တာထက် များနေခြင်းဟာ နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာကို များစေတာကြောင့် လူတွေဟာ သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရောများမှာ ကြောက်ကြပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါကလည်း လူတွေရဲ့အသက်ကို အများဆုံးအန္တရာယ်ပြုနေတဲ့ ရောဂါတွေဖြစ်နေပါတယ်။ သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရော များမှာကြောက်တော့၊ ခိုလက်စထရောပါတဲ့ အစာတွေ စားရမှာကိုလည်း ကြောက်ကြတော့တာပေါ့။
သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရောတွေ ပုံမှန်ထက်များနေမှာကို ကြောက်တာ မှန်ပါတယ်။ သွေးတိုးရောဂါရှိသူတွေ၊ ဆီးချိုရောဂါရှိသူတွေ၊ ဆေးလိပ်သောက်သူ ဆေးရွက်ကြီးသုံးစွဲသူတွေဟာ နှလုံးသွေးကြောရောဂါလေ ဖြတ်လေငန်းရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာ ပိုများသလို၊ သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရော ပုံမှန်ထက် များနေသူတွေဟာလည်း နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာ ပိုများကြပါတယ်။ သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရော အမျိုးမျိုးရှိတဲ့အနက်၊ LDL ခိုလက်စထရောနှင့် LDL ခိုလက်စထရော အမျိုးအစား နှစ်ခုကိုတော့ သိထားသင့်ပါတယ်။ သွေးထဲမှာ LDL ခိုလက်စထရော အမျိုးအစားတွေ များနေခြင်းဟာ အဲဒီလူမှာ နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေ ဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာ ပိုများတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပြလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးထဲမှာ LDL ခိုလက်စထရော အမျိုးအစားတွေ နည်းနေခြင်းကလည်း နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာများတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပြလက္ခဏာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သွေးထဲမှာရှိနေတဲ့ ခိုလက်စထရောတွေအနက် LDL ခိုလက်စထရောဟာ အများစုဖြစ်တဲ့အတွက် LDL ခိုလက်စထရောများရင် စုစုပေါင်း ခိုလက်စထရော (Total Cholesterol)လည်း များပါတယ်။ ဒါကြောင့် သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရောတွေ များနေမှာကို ကြောက်တာဟာ ကြောက်သင့်လို့ ကြောက်တာဖြစ်ပါတယ်။
သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရော တက်မှာကြောက်လို့ ခိုလက်စထရောပါတဲ့ အစားအစာတွေကို လုံးဝမစားဘဲ နေတာကတော့ ရာနှုန်းပြည့်မှန်တယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ခိုလက်စထရောပါတဲ့ အစားအစာတွေ များများစားရင် အစားအစာထဲက ခိုလက်စထရောတွေဟာ အူထဲကနေ သွေးထဲကိုဝင်သွားပြီး သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရောတွေ ဒိုင်းကနဲတက်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လူတိုင်းရဲ့သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရောတွေ ရှိနေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အဲသလို ရှိနေရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်း နှစ်ခုရှိပါတယ်။ တစ်ခုက ခိုလက်စထရောတွေကို ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပြီး၊ နောက်တစ်ခုက အစားအသောက်တွေက ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ နေ့စဉ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ခိုလက်စထရော ပမာဏဟာ အစားအသောက်တွေကရတဲ့ ပမာဏထက် ၃-၄ ဆပိုများပါတယ်။ လူ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ မိမိထုတ်လုပ်တဲ့ ပမာဏကို အစားအသောက်ကရတဲ့ ပမာဏနှင့်ချိန်ပြီး အတိုးအလျှော့လုပ်ပါတယ်။ အစားအသောက်ထဲမှာ ခိုလက် စထရောတွေ များများပါလာရင် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ထုတ်လုပ်တဲ့ပမာဏကို လျှော့လိုက်ပြီး၊ အစားအသောက်ထဲမှာ ခိုလက်စထရော နည်းနေရင် ထုတ်လုပ်တာကို တိုးမြှင့်လိုက်ပါတယ်။ ဒီတော့ ခိုလက်စထရောပါတဲ့ အစားအစာတွေကို ခါတိုင်းထက် နည်းနည်းပိုပြီးစားမိလို့ သွေးထဲမှာတက်လာနိုင်တဲ့ ခိုလက်စထရောပမာဏဟာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ နေ့စဉ်ထုတ်လုပ်နေတဲ့ပမာဏနှင့်ယှဉ်လိုက်ရင် မပြောပလောက်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရောများမှာကြောက်လို့ဆိုပြီး ခိုလက်စထရောပါတဲ့ အစားအစာတွေကို လုံးဝမစားဘဲနေတာဟာ ရာနှုန်းပြည့် မှန်တယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါဘူး။
ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ခိုလက်စထရောတွေ ဒီလောက်များများထုတ်နေရတဲ့အကြောင်းက ခိုလက်စထရောဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေကို သန်းပေါင်းများစွာသော ရုပ်ကလပ်စည်း (Cell – ဆဲလ်)လေးတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ အဲဒီဆဲလ်လေးတွေ တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကို (Cell membrane)ဆိုတဲ့ အမြှေးနံရံလေးတွေနဲ့ ပိုင်းခြားထားပါတယ်။ ဆဲလ်တွေရဲ့ အမြှေးနံရံ တည်ဆောက်ရာမှာ ခိုလက်စထရောက မပါမဖြစ် ပါရပါတယ်။ ဆဲလ်တွေဟာ လူတစ်ယောက် အသက်ရှင်နေသမျှ အချိန်တိုင်း နာရီတိုင်း မိနစ်တိုင်းမှာ အဟောင်းတွေပျက်ပြီး၊ အသစ်တွေ တည်ဆောက်နေရပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်း အားလုံးဟာ ရုပ်ကလပ်စည်းတွေ တည်ဆောက်ရာမှာ သုံးဖို့ ခိုလက်စထရောကို မိမိဘာသာ ထုတ်လုပ်ကြပါတယ်။ ဒါက အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက လူတွေ နေ့စဉ်စားသုံးတဲ့အစား အသောက်တွေထဲက အဆီတွေကိုအစာချေဖို့ သည်းခြေရည် (Bile) လိုအပ်ပါတယ်။ သည်းခြေရည်ကို အသည်းထဲမှာ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ သည်းခြေရည် ထုတ်လုပ်ဖို့ ခိုလက်စထရော လိုအပ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက အမျိုးသား အမျိုးသမီးတွေရဲ့ မျိုးဆက်ပွားအင်္ဂါတွေ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးဖို့၊ မျိုးဆက်ပွား လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဆောင်ဖို့၊ အီစထရိုဂျင် (Oestrogen) အစရှိတဲ့ မျိုးဆက်ပွားဟော်မုန်းတွေ ထုတ်လုပ်ရာမှာလည်း ခိုလက်စထရောကို မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပြန်ပါတယ်။
နောက်တစ်ခုက ဗီတာမင်ဒီကို လူတွေဟာ အစားအသောက်တွေကရတာထက် အရေပြားမှာ ထုတ်လုပ်တာက ပိုများပါတယ်။ ဗီတာမင်ဒီထုတ်လုပ်ရာမှာလည်း ခိုလက်စထရောကို မရှိမဖြစ် လိုအပ်ပါတယ်။ ခိုလက်စထရောဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အလွန်အသုံးကျတဲ့အတွက် လူ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ နေ့စဉ် အများအပြား ထုတ်လုပ်နေရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရော များမှာကြောက်လို့ ကြက်ဥလုံးဝမစားတဲ့ လူတွေ တွေ့ဖူးပါတယ်။ ကြက်ဥဟာ အရည်အသွေး အလွန်ကောင်းတဲ့ ပရိုတင်းတွေနှင့် အဖိုးတန် ဗီတာမင်မျိုးစုံ၊ အာဟာရဓာတ်မျိုးစုံ ကြွယ်ဝပါတယ်။ ကြက်ဥကို ခိုလက်စထရောများလို့ဆိုပြီး လုံးဝမစားဘဲနေတာဟာ မှန်တယ်လို့မဆိုနိုင်ပါဘူး။ ကြက်ဥရဲ့အနှစ်ကို ဖယ်ပြီး အကာသက်သက်ကိုစားရင် ခိုလက်စထရောလည်း မပါတော့ဘူး၊ အကာကနေ အာဟာရတွေ အများကြီးရနိုင်သေးတယ်လို့ ထင်နေကြပါတယ်။ တကယ်တော့ ဗီတာမင် အေ စတဲ့ အလွန် အဖိုးတန်တဲ့ ဗီတာမင်တွေဟာ ကြက်ဥရဲ့အနှစ်ထဲမှာသာ ၁ဝဝ% နီးပါး ပါနေတာပါ။ အကာထဲမှာ လုံးဝမပါ သလောက်ပါပဲ။ ခုခါမှာ ကြက်ဥမှာ DHA ဆိုတဲ့ အိုမီဂါ-၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေ ပါအောင် အစာကျွေးပြီး ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ကြက်ဥတွေရှိပါတယ်။ ဒီကြက်ဥတွေမှာလည်း DHA ဆိုတဲ့ အိုမီဂါ-၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်ဟာ ကြက်ဥရဲ့ အနှစ်မှာသာပါပါတယ်။ အကာမှာမပါပါဘူး။ ကြက်ဥရဲ့အကာမှာ ပရိုတင်း၊ ဆိုဒီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ မက်ဂနီစီယမ်၊ ဗီတာမင်ဘီတူးနှင့် နိုင်ယာစင် (Niacin) စတဲ့ အာဟာရ လေးငါးမျိုးလောက်သာ များများစားစား ပါပါတယ်။ ကျန်တဲ့ဗီတာမင်တွေ သတ္ထုအာဟာရတွေ အများစု-၉ဝ% လောက်ဟာ အနှစ်ထဲမှာပဲ ပါနေပါတယ်။ သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရောတက်မှာ ကြောက်လို့ဆိုတဲ့ ဆင်ခြေတစ်ခုတည်းနဲ့ အာဟာရဓာတ် မျိုးစုံကြွယ်ဝလှတဲ့ ကြက်ဥအနှစ်ကို လုံးဝမစားဘဲနေတာဟာ နစ်နာလှပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေကို မကျွေးဘဲမနေပါနှင့်။ လူငယ်တွေမစားဘဲ မနေပါနှင့်။
ခိုလက်စထရော တကယ်တက်စေတာက ပြည့်ဝဆီ
ကြက်ဥထက်ပိုပြီး သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရော တက်စေနိုင်တာက ပြည့်ဝဆီ (Saturated Fatty Acids) များတဲ့ အစားအစာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အမဲသား၊ ဝက်သား၊ ဆိတ်သား၊ ဘဲအရေခွံ စတာတွေမှာပါတဲ့ အဆီတွေ၊ မလိုင် ထောပတ်စတဲ့ နို့ထွက် အစားအစာတွေမှာပါတဲ့ အဆီတွေဟာ ပြည့်ဝဆီတွေဖြစ်ပါတယ်။ ပြည့်ဝဆီ တွေဟာ မကောင်းတဲ့ LDL ခိုလက်စထရော အမျိုးအစားတွေကို သွေးထဲမှာ များနေအောင်လုပ်ပေးတဲ့ အာနိသင် ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခိုလက်စထရောပါတဲ့ အစားအစာတွေထက် ပြည့်ဝဆီတွေပါတဲ့ အစားအစာတွေက ပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ မှတ်ထားသင့်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးက ပညာရှင်တွေကလည်း ပြည့်ဝဆီများတဲ့ တိရစ္ဆာန်ထွက်အစားအစာတွေ၊ နို့ထွက် အစားအစာတွေကို ဆင်ခြင်ပြီးစားရင် ကြက်ဥကို အကြီးအကျယ် ရှောင်စရာမလိုပါဘူးလို့ အတိအလင်းပြောထားတာရှိပါတယ်။ တစ်ရက်မှာ ကြက်ဥတစ်ဥလောက်၊ ရက်သတ္တတစ်ပတ်မှာ ၃-၄ ရက်လောက်စားရုံနဲ့ အန္တရာယ်မရှိနိုင်ပါဘူး။ ကြက်ဥ ၆-လုံးလောက် တစ်ပြိုင်တည်း စားတယ်ဆိုရင်တော့ သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရောတက်ပါတယ်လို့ လက်တွေ့သုတေသနလုပ်ကြည့်သူတွေက ပြောပါတယ်။
ခိုလက်စထရောမပါတဲ့ ပဲပုပ်ဆီ တဲ့
ခိုလက်စထရောမပါတဲ့ပဲပုပ်ဆီဆိုပြီး စာနယ်ဇင်းတွေမှာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ကြော်ငြာနေတာတွေ့ရသလို ခိုလက်စထရောမပါတဲ့ ပဲပိစပ်ဆီဆိုပြီး ကြော်ငြာနေတာလည်း တွေ့ရပါတယ်။ တကယ်တော့ ကြော်ငြာထဲက ဆီပုလင်းမှာ Soya Bean Oil လို့ ရေးထားတာမို့ ပဲပုပ်ဆီလို့ ပြောတာမှန်ပါတယ်။ ပဲပိစပ်ဆီ မဟုတ်ပါဘူး။
ခိုလက်စထရောမပါတဲ့ ပဲပုပ်ဆီဆိုတာ မှားတော့ မမှားပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကြော်ငြာထားတဲ့ ပဲပုပ်ဆီ တစ်မျိုးတည်းသာ ခိုလက်စထရောမပါတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပဲပုပ်ဆီစစ်စစ်ဆိုရင် ဘယ်တံဆိပ်နဲ့ ပဲပုပ်ဆီဖြစ်ဖြစ် ခိုလက်စထရော မပါပါဘူး။ ပဲပုပ်ဆီမှာသာမက ပဲဆီ၊ နှမ်းဆီ၊ နေကြာစေ့ဆီနှင့် စားအုန်းဆီစတဲ့ အပင်ထွက် ဆီမှန်သမျှ ဘာဆီမှာမှ ခိုလက်စထရောမပါပါဘူး။ ခိုလက်စထရောဟာ အမဲဆီ၊ ဝက်ဆီ မလိုင်၊ ထောပတ်စတဲ့ တိရစ္ဆာန်ထွက် အဆီတွေမှာသာ ပါပါတယ်။ ပဲပုပ်ဆီဖြစ်ဖြစ်၊ မြေပဲဆီ နှမ်းဆီ စားအုန်းဆီဖြစ်ဖြစ်၊ အမဲဆီ၊ ဝက်ဆီစတဲ့ တိရစ္ဆာန်ထွက်ဆီ တစ်မျိုးမျိုးရောထားမှသာ ခိုလက်စထရောပါမှာပါ။ သဘာဝအားဖြင့် ခိုလက် စထရောမပါပါဘူး။ ခိုလက်စထရော မပါအောင် အထူးစီမံထုတ်လုပ်စရာ မလိုပါဘူး။ တိရစ္ဆာန်ထွက်ဆီ မရောဖို့ဘဲ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ခိုလက်စထရောကြောက်လို့ ခိုလက်စထရောမပါတဲ့ ပဲပုပ်ဆီ၊ အထူး ရှာစရာ မလိုပါဘူး။ ပဲပုပ်ဆီစစ်စစ် မြေပဲဆီစစ်စစ် နှမ်းဆီစစ်စစ်ဆိုရင် လုံလောက်ပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့ ဆီ စားသုံးနည်း
သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရော မတက်ချင်ရင် အရေး ကြီးဆုံးက ပြည့်ဝဆီ ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာတွေကို ရှောင်ရပါမယ်။ အမဲဆီ၊ ဝက်ဆီ၊ မလိုင်၊ ထောပတ် စတဲ့ တိရစ္ဆာန်ထွက်အဆီတွေနှင့် အုန်းဆီကို ဖြစ်နိုင်သမျှ လျှော့ပြီးစားရပါမယ်။ လူတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်မှာ မိမိစားသုံးတဲ့ ကယ်လိုရီ စုစုပေါင်းရဲ့ ၇% ထက်နည်းတဲ့ ကယ်လိုရီ ပမာဏကိုသာ ပြည့်ဝဆီတွေကရအောင် စားသင့်ပါတယ်။ ဥပမာ- အသင့်အတင့် လှုပ်ရှားမှုရှိတဲ့ အရွယ် ရောက်ပြီး အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ တစ်ရက်မှာ ကယ်လိုရီ ၂ဝဝဝ-လောက် စားသုံးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ၂ဝဝဝ- ကယ်လိုရီရဲ့ ၆% ဖြစ်တဲ့ ကယ်လိုရီ ၁၂ဝ-ကိုသာ ပြည့်ဝဆီတွေကနေရအောင် စားသင့်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီ ၁၂ဝ- ရအောင် ပြည့်ဝဆီ ၁၃-ဂရမ်လောက်သာ စားသင့်တယ်။ ၁၃-ဂရမ်ဆိုတာ မြန်မာအလေးချိန်နဲ့ဆိုရင် သုံးမတ်သားလောက် ရှိပါတယ်။
ဒုတိယအချက်က ခိုလက်စထရောပါတဲ့ အစားအစာတွေကို အတိုင်းအဆနှင့် စားဖို့လိုပါတယ်။ အချို့ သူတွေဟာ ခိုလက်စထရောပါတဲ့ အစားအစာတွေ စားပေမယ့် သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရောအများကြီး မတက်ပါဘူး။ အချို့သူတွေကတော့ ခိုလက်စထရောပါတဲ့ အစားအစာ နည်းနည်းလေးစားရုံနဲ့ သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရော သိသိသာသာ တက်လာတတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက် နှင့်တစ်ယောက် မတူပါဘူး။ ဒါက မျိုးရိုးလိုက်တာနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ်။ သာမန်လူတစ်ယောက်အနေနဲ့ တစ်ရက်မှာ ခိုလက်စထရော ၃ဝဝ-မီလီဂရမ်ထက် ပိုပြီးမစားသင့်ပါဘူး၊ သွေးထဲမှာခိုလက်စထရောများနေသူ၊ နှလုံးသွေးကြောရောဂါ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာရှိသူတွေ၊ နှလုံးသွေးကြော ရောဂါမျိုးရိုးရှိသူတွေအနေနဲ့တော့ တစ်ရက်မှာ ခိုလက်စထရော ၂ဝဝ-မီလီဂရမ်ထက် ပိုမစားသင့်ပါဘူး၊ ကြက်ဥဘဲဥ အနှစ်အပြင် အမဲအသည်း ကြက်အသည်း ဝက်အသည်း၊ ဆိတ်အသည်း၊ အဆုတ် ကျောက်ကပ် စတဲ့ကလီစာတွေဟာလည်း ခိုလက်စထရောများတဲ့ အစားအစာတွေဖြစ်ပါတယ်။
ခိုလက်စထရော မတက်အောင် စားသောက်နည်း
သွေးထဲက ခိုလက်စထရော ပမာဏကို ထိန်းရာမှာ အသုံးဝင်တဲ့ စားသောက်နည်း နောက်တစ်ခုက Dietary Fibre လို့ခေါ်တဲ့ အစာမျှင်ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေ စားသုံးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစာမျှင်အချို့ ဟာ အူထဲမှာရှိတဲ့ ခိုလက်စထရောတွေကို သွေးထဲရောက်အောင် စုပ်ယူရာမှာ နှောင့်ယှက်ဟန့်တားပါတယ်။ အူထဲမှာ အစားအစာတွေကနေပါလာတဲ့ ခိုလက်စထရောတွေအပြင် သည်းခြေရည်ထဲက ခိုလက်စထရောတွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ပဲအမျိုးမျိုး၊ အသီးတွေ အရွက်တွေ စားသုံးခြင်းအားဖြင့် သူတို့မှာပါလာတဲ့ Soluble Fibre ဆိုတဲ့ အစာမျှင် အမျိုးအစားတွေက ခိုလက်စထရောတွေကို သွေးထဲ ဝင်မသွားနိုင်အောင် ဖမ်းပြီးထိန်းထားလိုက်ကြပါတယ်။ ခိုလက်စထရောတွေ သွေးထဲမဝင်နိုင်တော့ပါဘူး။
နောက်တစ်နည်းက ပြည့်ဝဆီ (Saturated Fat) တွေ နေရာမှာ မိုနို မပြည့်ဝဆီ (Mono-Unsaturated Fat) တွေ အစားထိုးပြီး စားသုံးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီဟာ မိုနိုမပြည့်ဝဆီစစ်စစ် ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတွေ စားနေကျ ဆီတွေထဲမှာတော့ မြေပဲဆီဟာ မိုနိုမပြည့်ဝဖက်တီး အက်ဆစ်တွေ အများဆုံးဆီဖြစ်ပါတယ်။ မိုနိုမပြည့်ဝဖက်တီးအက်ဆစ်တွေက ခိုလက်စထရောတွေကြောင့် နှလုံးသွေးကြောတွေ မပိတ်ဆို့အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ နှလုံးသွေးကြော ပိတ်တယ်ဆိုတာက LDL ခိုလက်စထရော အမျိုးအစားတွေဟာ သွေးကြောတွေရဲ့ နံရံတွေထဲကိုဝင်လာပြီး စုမိနေရာက သွေးကြောတွေကျဉ်းပြီး နှလုံးရောဂါဖြစ်တာပါ။ မိုနိုမပြည့်ဝ ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေက LDL ခိုလက်စထရော အမျိုးအစားတွေကို အောက်စီဂျင်ဓာတ်တိုးပျက်စီးမှု (Oxidative Damage) မဖြစ်အောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ အောက်စီဂျင် ဓာတ်တိုးပျက်စီးမှုမဖြစ်ရင် LDL ခိုလက်စထရော အမျိုးအစားတွေဟာ သွေးကြောတွေကိုဝင်ပြီး ကျဉ်းအောင်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ခိုလက်စထရော မတက်အောင် ဆေးဝါးမှီဝဲခြင်း
သွေးထဲမှာ မကောင်းတဲ့ LDL ခိုလက်စထရောတွေ နည်းအောင်၊ ကောင်းတဲ့ HDL ခိုလက်စထရောတွေများအောင် ဆေးများမှီဝဲစားသုံးခြင်းအားဖြင့်လည်း ထိန်းနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ခိုလက်စထရောပမာဏဟာ အစားအသောက်တွေကရတဲ့ ပမာဏထက် ၃-၄ ဆ ပိုများတယ်ဆိုတာ ပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ထုတ်လုပ်နေတဲ့ ခိုလက်စထရော ပမာဏကို လျှော့နိုင်ရင် သွေးထဲမှာ ခိုလက်စထရောတွေ သိသိသာသာ လျော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ ခိုလက် စထရောထုတ်လုပ်တဲ့ ဓာတ်ပြုမှုအဆင့်ပေါင်းများစွာ ရှိတဲ့အနက် တစ်ဆင့်မှာဝင်ပြီးဖျက်လို့်ရင် ခိုလက်စထရော ဖြစ်မလာနိုင်တော့ပါဘူး။ ခုခေတ်မှာ အသုံးများတဲ့ statin ဆေးတွေဟာ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်း ခိုလက်စထရောထုတ်လုပ်တဲ့ ဓာတ်ပြုမှုတွေကို အဆုံးတိုင်မရောက်ဘဲ အဆင့် တစ်ဆင့်မှာ ရပ်သွားအောင်လုပ်ပေးတဲ့ ဆေးဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တွေ ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း လိုက်နာမှီဝဲမယ်ဆိုရင် အလွန်ထိရောက်ပါတယ်၊ အသုံးကျပါတယ်။
ခိုလက်စထရော ပမာဏနှင့် အချိုးအဆမှန်အောင် ထိန်းသိမ်းနေထိုင်နည်း
HDL ခိုလက်စထရောတွေ နည်းနေခြင်းဟာလည်း နှလုံးသွေးကြောရောဂါတွေဖြစ်နိုင်တဲ့ အလားအလာ များတယ်ဆိုတဲ့ အချက်ပြလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုတဲ့ HDL ခိုလက်စထရောတွေ သွေးထဲမှာများအောင် နေထိုင်တတ်ခြင်းဟာလည်း ကျန်းမာရေးကို အကျိုးပြုပါတယ်။ သွေးထဲမှာ HDL ခိုလက်စထရောတွေ များလာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအချို့ရှိပါတယ်။
ပထမနည်းလမ်းက ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချ ထိန်းသိမ်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဝလွန်နေသူ တစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်အလေးချိန် ၆-ပေါင် လျော့သွားတိုင်း HDL ခိုလက်စထရော ၁ မီလီဂရမ်လောက် များလာနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နေ့စဉ်ပုံမှန် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားကစားခြင်းကလည်း သွေးထဲမှာ HDL ခိုလက်စထရောတွေ များလာ စေနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု ပြုလုပ်လေ့မရှိသူတစ်ယောက်ဟာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှု လေ့ကျင့်ခန်းပြု လုပ်တဲ့ ပထမရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာပဲ သွေးထဲမှာ HDL ခိုလက်စထရောတွေ ၅% လောက် မြင့်တက်လာ နိုင်ပါသတဲ့။
အယ်လကိုဟောပါတဲ့ ယမကာ အနည်းအကျဉ်း သောက်သုံးခြင်းဟာ သွေးထဲမှာ HDL ခိုလက်စထရောတွေ များလာစေနိုင်စွမ်းရှိတာကို တွေ့ရပေမယ့် အမျိုးသားတွေ တစ်နေ့နှစ်ခွက်၊ အမျိုးသမီးတွေ တစ်နေ့ တစ်ခွက်ထက် ပိုမသောက်မိအောင် ဆင်ခြင်ဖို့တော့ အရေးကြီးပါတယ်။ ယမကာမသောက်တတ်သူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ HDL ခိုလက်စထရော များလာအောင်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်သက်သက်နဲ့တော့ အရက်သောက်တာ လုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူး။
အိုမီဂါ-၃ ဖက်တီးအက်ဆစ်တွေပါတဲ့ အစေ့အဆံ၊ ပင်လယ်ငါး စတဲ့အစား အစာတွေ စားသုံးခြင်းကလည်း HDL ခိုလက်စထရော အချိုးအဆကို ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
Posted by Alex Aung at 12:22 PM
အုန်းနို့ ​ခေါက်​ဆွဲ ~ မုန့်​ဟင်းခါး ~ ၀က်​သားတု...
Sexual Harassment on the Buses စသည့် ရုပ်သံသတင်း
စိုက်/မွေး ဒုဝန်ကြီး ရဲ့ ရုပ်သံသတင်းအချို့
HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT BLOOD TYPES
ဘုရားကိုးဆူ ပူဇော်သည်မှာ အဘယ်နည်း?
မြန်မာ့ဂီတလောက၊ အိမ်ခြံမြေ၀န်ဆောင်မှုဥပဒေ၊ NCA စာချ...
တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်နေ့ (သာမည ဖလ အခါတော်နေ့)
Thai Style Mince Chicken Salad & Fresh Prawn Salad...
လူငယ်တွေအကြား အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီကူးစက်မှု အခြေအနေ
ကင်ဆာကို ဖိတ်ခေါ်နေသော ရောနှောဆီ နှင့် ပြန်ကြော်ဆီမ...
Facilitation skill ဆိုတာ
Pork Kyay Oh & Chicken Wanton Noodle
SMEs လုပ်​ငန်းရှင်​များအတွက်​ ​ဈေးကွက်​ပိုင်းဆို...